Xiaomi Mijia M365 dib u eegista mootada korantada: astaamaha, bixinta | Wararka Gadget
Dib u eegista mooto Xiaomi M365
Nacho Cuesta | | qalabka, Reviews
Waxaan tijaabinay mootada Xiaomi Mijia M365, badeecad ku soo gashay magaalooyinka waaweyn ee Isbaanishka iyo in yar, in yar, ayaa soo dhex galaysa inta kale ee dhulka Iberia iyada oo beddel dhab ah u ah gaadiidka dadweynaha iyo kuwa gaarka ah.
Mootooyinka korontadu ma noqon doonaan mustaqbalka dhaqdhaqaaqa? Dabcan, haa, wayna kujiraan hada, taasi waa sababta aan kuugu sheegeyno furayaasha qaabkan bukaanka korontada ee Xiaomi Wax alaab ah lama helin..
1 Xiaomi M365 ma yahay mootada korantada ugu fiican?
2 Aragtida koowaad
3 Su'aalaha badanaa la waydiiyo
3.1 Miyaa loo isticmaali karaa roobka?
3.2 Fuula buuraha?
3.3 Intee in leeg ayaan la socon karaa?
3.4 Ma nabad qabaan?
3.5 Mudo intee le'eg ayay qaadanaysaa in la buuxiyo batteriga?
3.6 Shaagagga ma daloolin?
3.7 Waa maxay culeyska ugu badan ee ay qaadi karto?
4 Dhinacyada si loo hagaajiyo
Xiaomi M365 ma yahay mootada korantada ugu fiican?
Malaha haa. Ma ahan sida ugu dhaqsaha badan ama ugu raqiisan, laakiin waa tan ugu dheellitiran taas ayaana ka dhigtay mid ka mid ah xulashooyinka ugu caqliga badan marka qofku raadinayo inuu iibsado mooto koronto.
Laakiin waa maxay sababta ugu miisaaman? Hagaag, way cadahay in Xiaomi uu ku ciyaaro booska faa'iidada leh ee suuqa iyadoo ay ugu wacan tahay joogitaankiisa suuqa taleefannada gacanta, baytariyada, nalalka LED, miisaanka, ... waxay lahaayeen khibrad iyo rikoodh adag oo ku filan oo ay ku bilaabaan korantadooda ugu horreysa mooto, kaas oo aan rabin (ama rabin), jacayl u qaado qof kasta oo isku dayo markii ugu horreysay. Waa maxay waxaani?
Haddii aadan waligaa xiriir la yeelan mootada korantada, dareenka ugu horreeya ee aad qabtaa waa inaad isdileyso oo aad taxaddar leedahay. Khibrad la’aanteennu waxay keentaa xiriirkii ugu horreeyay oo si tartiib tartiib ah u libdhaa si aad u bilowdo inaad ugu beddesho dareenka amni darrida tan xiisaha leh.
Daqiiqado gudahood, xawaaraha iyo bareegaba waa la dareemay. Qalooca waxbarashadu aad ayuu u yaryahay Marka dhalinyarada iyo waayeelka ayaa u isticmaali kara dhib la'aan marka marxaladan gaaban ee hoyga ah ay dhammaato. Waxaan xitaa leenahay qaab ECO ah, marka lagu daro kordhinta ismaamulka, wuxuu xaddidayaa xawaaraha ugu badan 18km / saacad wuxuuna bedelayaa jawaabta ceejinta si aad uga dhigto mid aad u jilicsan.
Jeexjeex waa analog sida kan baabuurka, taasi waa, waxay kuxirantahay wadada aan ka sameysanno gaariga, mootada ayaa gaari doonta xawaare dheeri ah ama ka yar haddii aan dhaqaajinno dhowr milimitir. Aniga xasillooni la yaab leh mootadan waana mid aan ku ilaalin karno laxanka qofka socda oo dhib la'aan.
Dabcan, mar alla markii aan si buuxda u qaadanno ceejinta, matoorka bilaa burushka ah ee ku yaalliin lugta hore sii daa awoodeeda buuxda isla markiiba, taas oo u tarjumeysa 500W oo awood ah iyo culeyska 16nm. Waxaa la yaab leh intee in le'eg dardargelinta aan ka leenahay joogsiga iyo jarista ay giraangiraheeda yaryar ku bixiyaan dhammaan dusha sare, xitaa marka ay qoyan yihiin.
Fuulo buuro dhib la'aan laakiin waxay muujineysaa in mararka qaar ay ku adag tahay inuu sii wado. Meelaha dhaadheer ee ugu adag (fuulitaanka garaashka, tusaale ahaan), waxaa lagugula talinayaa inaad lasocoto orod cayiman si kororka badan ee aan uqabano uu kujiro firfircoonidiisa sidaasna matoorku si sahal ah ayuu ushaqeyn karaa ilaa aan kadhigno. Haddii aynaan sidan u yeelin, waxay u badan tahay inaan cagaha dhigno dhexda. Si kastaba ha noqotee, inta badan meelaha dhaadheer ee aan ka helno dhulka Isbaanishka ayaa xallin kara dhibaato la'aan.
Nidaamka biriiga waa labalaab. Dhinaca kale waxaan leenahay biriig bir ah oo farsamaysan oo la dhigo gawaarida gadaal gadaal kaas oo bixiya awood ku filan oo lagu joojiyo mootada si badbaado leh, laakiin sidoo kale mootada Xiaomi Mi Scooter. waxay leedihiin biriig noqosho Sidaa darteed, marka aan istaagno, waxaan u beddeleynaa tamarta firfircoonida ee aan ku qaadanno tamar koronto oo loo adeegsan doono in lagu kala bixiyo madax-bannaanida mootada korontada wax yar.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in bareega hore ee gaariga uu leeyahay nooc ka mid ah Nidaamka ABS ee ka hortaga qufulka shaagagga bareeg adag, wax muhiim u ah ka hortagga ku-dhaca dhulka oo hagaajiya nabadgelyadeena.
Ma la jejebi lahaa qalabka faleebada ee Haydarooliga okay? Shaki la'aan, dareemida bareeggu waxay noqoneysaa mid ka sarreysa oo isticmaasha far keliya laakiin hoos u dhaca taas ayaa ah in nidaamku qaali noqon doono oo aad u dhib badan yahay in la dayactiro iyadoo la adeegsanayo bareegga qalabka farsamada, kabaalka iyo fiilada jiidaya kala jejebiyuhu labaduba waa baaskiil markaa waxaan heysanaa qalab dayactir ah isla markiiba iyo lacag aad u yar.
Heerka raaxada, Waxaan ka helnay mootada Xiaomi mid aad u adag, wanaag iyo xumaanba. Xadgudub kasta ama isku dheelitirnaan la’aanta ka jirta dhulka waxaa loo gudbiyaa qalabka wax lagu qabsado gacmaheennuna waxay ku dambayn karaan waxyeello ku timaadda raacid dheer haddii dusha sare ee waddadu aysan xaalad wanaagsan ku sugnayn. Ma jiraan wax ganaax ah, markaa taladaydu waxay tahay inaad raacdo cadaadis xoogaa yar oo giraangiraha ah si taayirku laftiisu ula qabsado dhulka oo uusan dib ugu soo laaban laakiin aan na dhaafin tan iyo markii aad tan samaynayso waxay kordhinaysaa halista wax daloosha (iyagu waa giraangiraha leh tuubbo) ama xitaa ku dul wareego qalooc haddii aan xawaare sare ku soconeyno.
Tilmaam kale oo si weyn kor loogu qaado raaxada mootada ayaa ah ku beddel qabashada caaggaaga kuwa xumbada leh cufnaanta sare. Kuwa baaskiilku waa u qalmaan oo waxaa jira noocyo badan oo laga kala xusho (astaanta Ritchey wax yar ayey leedahay oo kama badna € 10). Kala beddelka xajinta iyo cadaadiska hoose ee giraangiraha waxaan si weyn u wanaajin doonnaa raaxada oo waxaan yareyn doonnaa gariirka.
Aniguba taas waan ka helay waxaan leenahay nalalka ku dheggan, labada hore iyo xagga dambe. Iftiinka gadaal wuxuu u shaqeeyaa sida nalka booska laakiin sidoo kale wuxuu u yahay biriiga biriga marka kabaalka u dhigma la shaqeeyo, marka hadaan wadada aadno, gawaarida iyo mootooyinka waxay awoodi doonaan inay ogaadaan inaan xawaaraha yareyneyno si iyagana ay si nabadgelyo leh u sameyn karaan oo odoroso.
Iftiinka hore wuxuu si fiican u kala firdhiyaa iftiinka oo wuxuu leeyahay awood sax ah si loo iftiimiyo waxa ina haysta oo ilaa shan ama lix mitir ah oo inna horreeya. Ma ahan mid aad u awood badan sidaa darteed haddii aad wax badan fuusho habeenkii, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ku buuxiso wejiga koofiyadda. Safarrada gaagaaban ee aan ognahay, waa in ka badan intaas.
Markaan gaarno meeshii aan u socono, Waxaan isku laabannaa mootada muddo 15 ilbiriqsi ah ugu badnaan. Kaliya waa inaan sii deynaa sii deynta deg degga ah ee ku taal isteerinka, is laaba oo la jaan qaado tab leh gambaleelka oo leh giraangirta gadaal si setku uu gebi ahaanba u laaban yahay. Waqtigaas ka dib waan qaadi karnaa (culeyskiisu waa 12,5Kg) ama si raaxo leh ayaan u jiidi karnaa meel walbana ku kaydin karnaa, xitaa waxay ku habboon tahay jirridda baabuur is haysta oo hadda socda
Magaalooyinka sida Madrid tani waa mid aad u faa'iido badan maaddaama dadka ku nool magaalooyinka ku yaal hareeraha caasimadda ay qayb ka yihiin safarkooda si ay ugu shaqeeyaan baabuur, dhigtaan meel si fudud loo heli karo ka dibna ka dhiga kiiloomitirkii ugu dambeeyay ee magaalada oo ay marayaan mootada Xiaomi. , iyadoo laga fogaanayo taraafikada saacadaha degdegga ah iyo fowdada Bartamaha Madrid.
Sida aan ognahay in badan oo idinka mid ah wali ma dhammeeyaan u boodboodka dhaqdhaqaaqa korantada ee mootooyinka sababo la xiriira shakiga ay dhalinayso, hoosta waxaan ku soo ururin doonnaa su'aalaha ugu badan ee aad inta badan qabtid:
Miyaa loo isticmaali karaa roobka?
Waxaan isticmaali karnaa mootada dhib kuma qabno dabaqyada qoyan ama roob dhexdhexaad ah. Qabsashadu way fiicantahay oo IP54 ilaalinta ayaa hubinaysa in siigada, wasakhda ama biyuhu aysan geli doonin isku xirayaasha iyo nidaamka korantada. Waxaan sidoo kale leenahay fandhaal, hore iyo gadaalba, si aan uga hortagno dhoobada ama biyaha inay dharkeenna ku wasakhoobaan.
Sidaan horeyba u soo sheegnay, intoodii badnayd iyaga geliyaan doonaa iyaga oo aan dhibaato in kasta oo ay tahay inaad ogaato in bixintaas dheeriga ah ee mishiinku sameeyo si looga gudbo sinnaan la'aanta waxay sababi doontaa hoos u dhac ku yimaada ismaamulka.
Intee in leeg ayaan la socon karaa?
In kasta oo Xiaomi ay ku dhawaaqday xaddiga rasmiga ah ee 30 kiiloomitir, imtixaannadeennii ayaan ku soo safarnay masaafada u dhexeysa 20km iyo 25km.
Helitaanka in ka badan ama ka yar kiiloomitir ismaamulku waxay kuxirantahay nooca wadista ee aan sameyno, waxa aan miisaanka ku leenahay, xaaladda dhulka, inta jeer ee aan isticmaalno bareegyada dib-u-dhiska, iwm. Ugu dambeyntiina, arrimaha saameynaya haddii baabuur uu isticmaalo wax ka badan ama ka yar shidaal waxaa loo rogi karaa mootada noocan ah
Ma nabad qabaan?
Aad u ammaan badan laakiin waxay u baahan yihiin waqti cayiman oo la-qabsasho ah si ay ula qabsadaan xagal-dhudubkooda gacmahooda cidhiidhiga ah, helitaanka dareemaha bareegga iyo xawaaraha, iwm.
Daqiiqado gudahood, waad ka gudbi doontaa muddadaas bilowga waxaadna arki doontaa sida, tartiib tartiib, mootadu ay kuugu sii kordhineyso.
Xusuusnow inaad xirato koofiyad safaradaada. Shilalka waxay dhacaan marka aan filayno xitaa in kastoo mootooyinka korontada ay nabad qabaan, marna ma ogaan karno goorta aan dhici karno. Ka fogow cabsida.
Mudo intee le'eg ayay qaadanaysaa in la buuxiyo batteriga?
Waqti buuxa oo lacag bixin ah ilaa 5 saacadood sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad lacag ka qaaddo habeenkii sidaasna maalinta xigta u diyaar garow.
Shaagagga ma daloolin?
Kuwa heerka ku yimaad haa maadaama ay isticmaalayaan qol hawo ah. Taayirku waa mid aad u cufan oo inaad duudduubto garoonka mooyee ama aad xoogaa muraayad ah qabato, way kugu adkaan doontaa inaad dalool yeesho.
Si kastaba ha noqotee, waxaad ku beddeli kartaa taayirrada ½ 8-inch gaagaal adag sida kuwa laga helo kuraasta curyaamiinta qaarkood. Markaad sidan sameysid, waxaad illoobi doontaa daloolinta, in kasta oo aad nafta u hureyso raaxo maxaa yeelay sinaan la'aan kasta oo ka jirta dhulka ayaa loo wareejiyaa xarkaha si muuqata oo muuqata.
Waa maxay culeyska ugu badan ee ay qaadi karto?
100Kg. Laguguma talin karo inaad ka badato shaxdan maadaama baytariyada ay ku yaalliin aagga taageerada, markaa haddii ay dhacdo in qaab dhismeedka uu ku fududaado sababtoo ah in ka badan miisaanka ugu badan ee la oggol yahay, waxaan la kulmi karnaa shil halis ah haddii ay bateriga waxyeelleeyaan oo ay waxyeelloobaan. degganeyn
Magaalada Madrid waxaad ku arki doontaa waalidiinta u tagaya inay caruurtooda ka raadsadaan mootada korontada, xitaa waxay u iibsadeen taageero si ay xoogaa uga yara sareeyaan oo ay sidaas si fudud ku gaaraan qalabka wax lagu qabto. In kasta oo aan tan laguugula talin (bukaanka waxaa loogu talagalay gaadiidka shakhsiga ah ee dadka, badbaadada ilmahaaga iyo taadaba ayaa khatar ku jirta), ilaa iyo inta 100Kg aan la wada dhaafin wax dhib ah ma jiri doonaan.
Haddii aad qabtid su'aalo kale oo la xiriira bukaanka, noo dhaaf faallo annaguna waan ka jawaabi doonnaa su'aasha.
Dhinacyada si loo hagaajiyo
Waxaan horay u aragnay dhammaan wanaagga Mi Electric Scooter laakiin waxaa jira waxyaabo suurtagal ah oo ay tahay in lagu hagaajiyo noocyada mustaqbalka ee badeecada.
Midka koowaad waa ku dar bandhig shaashadda taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan ku aragno waqtiga dhabta ah dhinacyada mootada sida xawaaraha aan ku soconeyno, kiiloomitirka aan ku soo wada safarnay ama safarka, waqtiga aan isticmaalnay, iwm. Tan waxaa laga samayn karaa barnaamijka moobiilka laakiin waxtar ma aha in loo baahan yahay in loo adeegsado taleefannada casriga ah si loo arko xogta aasaasiga ah.
ka dillaacyada aagga laalaabka sidoo kale waa wax dib u eegis lagu sameeyo. Isticmaalayaal badan ayaa doortay inay dhigaan cinjir ama 3D-daabacan meel si ay ugu dhigaan aaggaas, iyagoo xallinaya dhibaatada si aad u ballaaran. In kasta oo qoqobkani badiyaa yahay wax caam ah (baaskiilado badan ayaa ah qafis cricket leh oo waqtiga la dhaafaayo) oo aan nabadgelyadeenna khatar gelinayn, waa wax laga xumaado.
para gaadiid fudud marka laalaabo, Way fiicnaan laheyd in lagu daro giraangiraha sida kuwa kabaha ama shandadaha safka ku jira.
Ugu dambeyntii ceejinta ayaa u beddeli lahayd feedh sida mootooyinka. Sababta waa mid fudud oo waa in taabaddu ay tahay waxa kaliya ee aan qabano inta aan ku dhaqaaqeyno skate-ka, sidaa darteed, waxaa aad amaan u ah in faraheena oo dhan ay xoog ku qabsadaan birta halkii ay ku qaban lahaayeen suulka weyn badhanka xawaaraha. waxaan hadda heli.
Dhammaan wixii aan soo sheegnay waa waxyaabo horeyba looga arki karay mootada Xiaomi Qicycle Euni es808 sidaa darteed waxaan caddeynay in shirkaddu ay qabanayso shaqo weyn si ay u horumariso alaabteeda isla markaana waqti kadib waxaan arki doonnaa nooc labaad oo ah M365 oo leh waxaas oo dhan. .
Isku tanaasulka xawaaraha iyo ismaamulka
Dayactir la’aan ayaa sababi karta dildilaaca aagga laalaabka
Soo bandhig ayaa ka maqan shaashadda gacanta si loo arko xawaaraha iyo xogta kale.
Dib u eegida: Nacho
Ma u qalantaa Mootada Xiaomi? Xaqiiqdii. Shaki iigama jiro inay tahay safarka mustaqbalka ee magaalooyin waawayn waxaana cadayn u ah shirkadaha aan la soo koobi karin ee u ogolaanaya inay kireystaan ​​gawaaridaan shaqsiyadeed (VMP) taasoo DGT ay sidoo kale isha ku heysay inay nidaamiso isticmaalkooda si iska ilaali shilalka, gawaarida kale iyo dadka lugeynaya.
Mootada Xiaomi maahan tan ugu weyn, ugama dhaqsaha badan mana ahan kan bixisa ismaamulka ugu badan, hase yeeshe, waa tan ugu isu dheellitiran dhammaan xilligan la iibiyay suuqa, oo leh qiimo aad u sarreeya oo tayo sare leh marka la barbar dhigo tartanka. Ma jiraan mootooyin koronto ka fiican? Haa, laakiin way labanlaabmayaan ama saddex-jibbaarayaan qiimaha, culeys ka badan ayaa luminaya rafcaankaas loogu talagalay dadka doonaya mootada korantada ee shaqeysa oo miisaankeedu yar yahay intii suurtagal ah. Marka la eego, Xiaomi wuu ka sii sarreeyaa inta kale.
Haddii aad u isticmaali doontid gaadiid ahaan maalin ka maalin, iibsashadaada ayaa aad loogu taliyay maadama aad waqti yar ku jaan goyn doonto. Dib-u-soo-buuxinta batterigaaga 280Wh LG waxay kugu kallifaysaa uun xoogaa senti ah iyo keydka ay keeneyso marka la barbardhigo gaadiidka dadweynaha ama gaariga waa mid aad uga sii cajaa’ib badan, iyadoo laga faa’iideysanayo inaad mar walba heli doonto oo aad meel walba u qaadan karto.
Dayactirka ficil ahaan waa eber iyo inta badan qeybaha ay xiran karaan (xarig biriiga, giraangiraha, ...) waxaa si fudud looga heli karaa internetka ama dukaan kasta oo baaskiil ku yaal.
Mahadsanid badan shirkadda ICON Multimedia inaad na siiso qeybta tijaabada ee mootada Xiaomi.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Reviews » Dib u eegista mooto Xiaomi M365